Liiska Hubinta Fiisaha Ganacsiga Hindiya | Fiisaha tooska ah ee Hindiya
Liiska Hubinta Fiisaha Ganacsiga ee Hindiya
Fiisaha e-Ganacsiga ee Hindiya waxaa loo isticmaali karaa dhowr ujeeddo ganacsi ama ganacsi. Si aad u hesho fiisaha ganacsigan ee Hindiya, socdaalku wuxuu u baahan yahay baasaboor shaqeynaya.
Haddii aad qorsheyneyso inaad booqato Hindiya ujeeddadaada koowaad ee safarku waa ganacsi ama ganacsi ahaan, markaa waa inaad dalbataa Fiisaha e-Ganacsiga ee Hindiya. The Ganacsiga e-Visa ee Hindiya waa dukumiinti rasmi ah oo ogolaanaya gelitaanka iyo socdaalka gudaha Hindiya ujeedooyin ganacsi ama ganacsi sida kaqeybgalka shirarka farsamada / ganacsiga, kaqeybgalka bandhigyada, carwooyinka ganacsiga / ganacsiga iwm.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in ay tahay inaadan ku imaanin Hindiya e-Visa Dalxiis (ama Fiiso E-Dalxiis) oo aad ku qabato nashaadaad ganacsi. The e-Dalxiiska Visa waxaa loola jeedaa ujeedada koowaad ee dalxiiska mana ogolaanayo howlaha ganacsiga. Hay'adda Socdaalka ee Hindiya waxay fududeysay in lagu dalbado Visa-ka Ganacsiga ee Hindiya khadka tooska ah oo si elektaroonig ah loogu soo celiyo emayl ahaan. Kahor intaadan dalban Fiisaha e-Ganacsiga ee Hindiya hubi inaad ka warqabto dukumiintiyada muhiimka ah loo baahan yahay waxaanan ku daboolnaa kuwan liiska hoose. Dhamaadka qodobkan, waxaad codsan kartaa Visa-ha e-Business Visa oo kalsooni leh.
Liistada Hubinta Dukumintiga ee Visa e-Business Visa
Passport - Baasaboorku waa inuu jiraa ugu yaraan 6 bilood laga bilaabo taariikhda dhoofitaanka.
Skaanka bogga macluumaadka Baasaboorka - Waxaad u baahan doontaa nuqul elektiroonig ah oo ah taariikh nololeedka - ama sawir tayo sare leh ama iskaan. Waxaa lagaa rabaa inaad soo dejiso tan iyada oo qayb ka ah nidaamka Codsiga Visa Visa Business.
Sawirka Wajiga Dijital ah - Waxaa lagaa doonayaa inaad soo rarto sawir dijitaal ah oo qayb ka ah nidaamka dalabka Visa Business Business online. Sawirku waa inuu si cad u muujiyaa wejigaaga.
Talooyin waxtar leh -
a. Dib ha u isticmaalin sawirka ka socda baasaboorkaaga.
b. Kaa qaado sawir adiga oo ka soo horjeeda darbiga caadiga ah adoo isticmaalaya taleefan ama kamarad.
Waxaad ka akhrisan kartaa si faahfaahsan oo ku saabsan Shuruudaha Visa ee Hindida Hindida ah iyo Shuruudaha Visa Passport-ka Hindiya.
Nuqul kaarka ganacsiga - Waxaa sidoo kale lagaa rabaa inaad soo dejiso nuqul kaarkaaga ganacsiga ah. Haddii aadan haysan kaar ganacsi, waxaad sidoo kale bixin kartaa warqad ganacsi oo ka socota dhigiisa Hindiya oo sharraxaysa shuruudaha.
Haddii aadan haysan kaarka ganacsiga, ugu yaraan waxaad bixin kartaa magacaaga ganacsi, emayl iyo saxiixaaga.
koox: + 61-323-889774
Faahfaahinta shirkadda Hindiya - Maaddaama aad booqanaysid kuwa kula midka ah ganacsigaaga Hindiya, waa inaad haysataa faahfaahinta ganacsiga Hindida ah ee anfacaya sida magaca shirkadda, cinwaanka shirkadda iyo websaydhka wehel.
Shuruudaha kale ee lagama maarmaanka ah:
6. Cinwaanka emailka:: Waa inaad haysataa cinwaan emayl sax ah oo loo isticmaali doono inta lagu gudajiro codsiga. Marka la soo saaro Visa-ka E-Business-ka ee Hindida ah, waxaa lagu soo diri doonaa cinwaankan emayl ee aad ku soo dirtay arjigaaga.
7. Kaarka amaahda / deynta ama koontada Paypal: Hubso inaad haysato Kaarka Deynta / Deynta (waxay noqon kartaa Visa / MasterCard / Amex) ama xitaa koontada UnionPay ama PayPal si aad lacag u bixiso oo ay leedahay lacag ku filan.
a. Inta lacagta la bixinayo iyadoo la adeegsanayo albaabka lacag bixinta ee 'Secure PayPal', waxaad u isticmaali kartaa Debit-kaaga ama CreditCard inaad lacag ku bixiso. Looma baahna inaad haysato xisaab PayPal ah.
Mudo intee le'eg ayey Visa-e-Business Visa-ku ansax ku tahay?
Fiisaha Ganacsiga Hindiya wuxuu shaqeynayaa wadar ahaan 365 maalmood laga bilaabo taariikhda la soo saaray. Joogitaanka ugu badan ee Hindiya ee Ganacsiga E-Visa (ama Visa Online Business) waa wadar dhan 180 maalmood waana Visa galitaan badan.
Hawlaha noocee ah ayaa loo oggol yahay hoos timaadda Ganacsiga E-Visa ee Hindiya?
Dejinta shirkad ganacsi / ganacsi.
Iib / iibsi / ganacsi.
Kaqeybgalka shirarka farsamada / ganacsiga.
Kaqeybgalka bandhigyada, carwooyinka ganacsiga / ganacsiga.
Khabiir / khabiir ku xeel dheer mashruuc socda.
Dalbo Visa-ha e-Ganacsiga Visa
Haddii aad tahay markii ugu horreysay ee booqde ganacsi ku aado Hindiya, wax dheeraad ah ka baro Tabaha booqdayaasha ganacsiga.